BAFTA Awards ကို တက်ရောက်လာခဲ့တဲ့ Kate Middleton ရဲ့ Fashion က Time’s Up movement ကို ဘယ်လိုတုန့်ပြန်သလဲ? – FemaleWear.net
Kate Middleton ကတော့ fashion ကိုနှစ်သက်သူတစ်ယောက်လို့ အားလုံးကခံယူထားကြလို့ သူမတက်လာသမျှပွဲတွေဆိုရင် သူမရဲ့ fashion ကို မျှော်လင့်စောင့်စားနေကြရတာပါ။ အခုလည်း Royal Albert Hall မှာ ညနေုပိုင်းတွင်ပြုလုပ်တဲ့ 2018 BAFTA Awards ရဲ့ red carpet ကို Kate Middleton ကတော့ ယောကျာ်းဖြစ်သူ Prince William နဲ့အတူ ပွဲတက်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ပွဲတက်ရောက်လာတဲ့ အခါမှာ သူမဝတ်ဆင်ထားတဲ့ ဝတ်စုံလေးကရိုးရှင်းပြီး လက်ထဲမှာလည်း black clutch လေးကို ကိုင်ခါပေါ်လွင်နေပါတယ်။ Prince William ကတော့ အနက်ရောင် suit ကို ဝတ်ဆင်လာပါတယ်။ တချို့ကလည်း Kate Middleton ရဲ့ဝတ်စုံဟာ Time’s Up movement ကို support လုပ်တယ် လက်ခံတယ်လို့ ထင်မြင်ကြပေမယ့် တချို့ကတော့ support မလုပ်ဘူးလို့ ကိုယ့်အတွေးတွေနဲ့အတူ ဝေဖန်နေတာတွေကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။
The Duke presented Sir Ridley Scott with the Academy Fellowship and, after the ceremony, joined The Duchess to congratulate tonight’s winners onstage. pic.twitter.com/JMcCggSFtl
Tags: 2018 BAFTA Awards, Kate Middleton, Time's Up
Mulberry ကထုတ်လုပ်တဲ့ Spring Summer 2018 Collection အတွက် ဒီဇိုင်းဆန်းလေးများ